Hooyadi ciil qabay: inanteeda ayaa ku jira caadada dumarka 7 sano, 3 sano kadib markay qaadatay muddadi ugu horeysay - TELES RELAY
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD Hooyo khatar ah: Gabadheedu waxay ku jirtaa dhiig-yari wakhtiyada 7, sanado 3 ka dib markii ay jirtay muddadii ugu horreysay
Hooyo khatar ah: Gabadheedu waxay ku jirtaa dhiig-yari wakhtiyada 7, sannado 3 ka dib marka ay timaado xilligeeda koowaad
TELES RELAY 8 July 2019
Qaangaadhnimada waa marxalad adag oo loogu talagalay dhalinyaro badan. Laakiin marka la eego marka ilmuhu la kulmo inta uu weli aad u yar yahay si uu u fahmo waxa ku dhacaya isaga?
Emily Dove wuxuu ahaa kaliya 2 sano jir markii jirkeeda uu muujiyay calaamadaha ugu horreeya ee baaluqnimada: naaska gabadha ayaa bilaabay inuu koro, waxayna ku jirtay xilligii ugu horeeyay ee da'da 4.
Waalidiintiisa waxay la yaabeen wakhti kaddibna xaaladdu way ka sii xumaatay. Iyadoo ay ugu wacan tahay horumarkeeda hore, Emily wuxuu soo galay maro-ba'an da 'da da' sano jir ah 7.
Inta lagu jiro wareysiga Muraayadaha tooska ahEmily hooyadeed, Tam Dover, ayaa sheegtay in isbeddelada muuqaalkan oo kale ay gabadheeda ka dhigtay mid aad u adag, ayna ka warqabto inay ka duwan tahay gabdhaha kale da'dooda.
Taas waxay qireysaa in ay adagtahay in ay sharaxdo Emily wixii dhab ahaantii socday. Si kastaba ha ahaatee, iyada iyo ninkeeda ayaa loo go'aamiyey in aysan u oggolaan in ay naftooda la argagaxo si aysan u carqalin ilmahooda.
Emily wuxuu bilaabay inuu si dhakhso ah u koro ka dib markii uu dhashay: marka ay dhashay afar bilood, waxay horayba u jirtay xajmiga cunug 1 sano jir ah, iyo laba sano jir, waxay lahayd naas hore.
Kadib booqasho dhowr ah oo dhakhtarka ah, waxaa ugu dambeyntii la ogaaday in gabadhu ay ka soo raynayso adrenal hyperplasia. Dhibaatadani waxay keenaysaa wax soo saarka xad-dhaafka ah ee steroids waxayna u horseedi kartaa qaangaadhka da'da yar. Emily sidoo kale wuxuu ku jiraa maskaxda autism.
Markay ahayd toddoba jir oo kaliya, dhakhtarradu waxay go'aansadeen inay ku meeleeyeen menopause. Noocaan noocan oo kale ah waxay la timaadaa isla dhibaatada ay haweenku ku hayaan 50-ka calaamadoodba: timo lumis, daal iyo niyad-jabka.
Wareysi lala yeelanayo Hadda si aad u jeceshahayFaahfaahin:
Waxaan u sheegi karaa inay caadi tahay si aysan u cabsi qabin, laakiin taasi caadi maaha. Sida loo sharaxo gabdhaha dugsiga hoose ee ay ku dhex marayso baaluqnimada ama menopause? Waxay jebisay qalbigayga!
Emily weli waxay u baahan tahay caawimo caafimaad oo qaali ah, sidaas darteed qoyskeeda ayaa abuuray bog Socda Sanduuqa Me si ay u helaan deeqo lacageed.
Dhinaceeda, gabadhu waxay u muuqataa in ay u adeegsanayso farqiga u dhaxeeya waxoogaa yar; Inkasta oo ay waalidkeed ka baqayaan in lagu dhibo dugsiga, waa ilmo caqli leh, hal abuur leh oo caan ah.
Inkastoo ay ka dheeraan karto qarashka ay isku fasalka yihiin, waxay aad u tahay mid macaan leh, xiiso leh oo daryeelaysa carruurta kale ee ka baxsan xajmigeeda oo ay uga mahadcelinayaan sida ay tahay: qof qurux badan.
Gabadhu waa inay la kulantaa tijaabooyinkeeda hore ee da 'yar, laakiin iyada oo ay uga mahad celineyso waalidkeedi iyo dabeecadeeda cajiibka ah, waxaanu heysanaa soo bandhigid ah in ay u badan tahay in ay si fiican u qabato nolosha.
Waalidiinta khaladka khatarta leh waxay sameeyaan waalidkooda caruurtooda
Waxay lumisaa lugta sababtoo ah kansarka, taas oo markaa ka caawin doonta in ay bilaabato xirfad mihnadeed
La caméra sans fil mise à niveau qui permet à votre smartphone de voir où que vous soyez est en vente pour 29 $ – BGR